Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း)
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Chlorhexidine ကလော်ဟဇ်စီဒင်း ဆိုတာ ဘတ်တီးရီးယားရောဂါတွေအတွက် ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ အရေပြားပေါ်လိမ်းပြီး ခွဲစိတ်မှု၊ ဆေးထိုးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတွေကြောင့် ပိုးဝင်မှာကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ။် ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းမှုတွေအတွက်လည်းသုံးနိုင်တယ်။ ပိုးသတ်ဆေး၊ ခံတွင်းအနာနဲ့ရောင်ရမ်းမှုများအတွက် သုံးနိုင်တဲ့ အုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်။
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့ ညွှန်းတဲ့အတိုင်းသုံးပါ။ သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ညွှန်းဆိုသည့်အတိုင်းသာသုံးသင့်ပြီး ပမာဏပိုသုံးခြင်း လျော့သုံးခြင်း အချိန်ပိုကြာအောင်သုံးခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး၊ ရေးထားသောဆေးအညွှန်းအတိုင်း သေချာစွာ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဆေးမလိမ်းခင် လိမ်းမည့်နေရာ အရေပြားကို သေချာဆေးကြောပါ။ လိမ်းလိုသည့်နေရာကိုပဲ သေချာလိမ်းပါ။ နက်လွန်းသည့်ရှရာ၊ ကုတ်ခြစ်ရာ၊ ပွင့်နေသည့် ဒဏ်ရာအနာများကို မလိမ်းသင့်ပါ။
Chlorhexidine ပါသည့် ဆပ်ပြာသုံးလျှင်လည်း လိုအပ်သည့်နေရာကိုသာ သုတ်လိမ်းပြီး ရိုးရိုးရေနဲ့ဆေးချပါ။ မလိုတဲ့နေရာကို ပိုပြီးမလိမ်းပါနဲ့။
ဆေးကို ပိုးကင်းသောအနေအထားမှာ ထုတ်လုပ်ကြပေမယ့် အမြဲပိုးမွှားကင်းစင်မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆေးထဲပိုးမွှားဝင်မနေစေရန်-
ဆေးလိမ်းရာမှာသုံးသင့်သည့် ဝါဂွမ်းအဝတ်စမျိုးနှင့်သာ လိမ်းပါ။
ဆေးဘူးထိပ်အဝကိုလက်နဲ့ထိခြင်း၊ အရေပြားနှင့်ထိပြီး လိမ်းခြင်းများမလုပ်ပါနဲ့
ရေ၊ အခြားအရည်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရောပစ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့
ဆေးလိမ်းသည့်ဝါဂွမ်းအဝတ်ကိုလည်း တစ်ကြိမ်သာသုံးပြီး လွင့်ပစ်ပါ။
လက္ခဏာများမသက်သာပါက၊ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ခြင်းပြန်ပြောပါ။
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
တိုက်ရိုက်အလင်းရောင်၊ စိုစွတ်မှုနဲ့ မထိတွေ့ဘဲ သာမန်အခန်းအပူချိန်မှာဘဲ သိမ်းထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေချိုးခန်းတို့မှာ မသိမ်းပါနဲ့။ ဆေးအမျိုးအမည်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး သိမ်းဆည်းသင့်တဲ့ပုံစံ အမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆေးအမျိုးအမည်ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းဖို့အညွှန်းကိုသေချာဖတ်သင့်ပါတယ်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေကိုမေးလို့လည်းရပါတယ်။ ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်ပါက မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဆေး၊ စားစရာ၊ ဆိုးဆေး၊ တိရိစ္ဆာန် စသည်ဖြင့် ဓါတ်မတည့်သည်များရှိပါ ဆရာဝန်သို့ ဆေးပေးသူကို ပြောပြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
နှစ်လအောက်ကလေးတွေမှာသုံးပါက အထူးဂရုပြုပါ။ ငယ်လွန်းသောကလေးတွေအရေပြားမှ ထိခိုက်လောင်ကျွမ်းခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အသားများလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ နီရဲခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ Chlorhexidine ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေတာမျိုး ဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကိုပြောပြရပါမယ်။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ပြချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေရပ်လိုက်တာ၊ ပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
တချို့သောဆေးတွေဟာ အစားအစာတချို့၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
The safety and efficacy of chlorhexidine gluconate has not been established in patients less than 18 years old. However, the use of chlorhexidine gluconate may be appropriate in some situations.
Chlorhexidine (ကလော်ဟဇ်စီဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Chlorhexidine is available in the following dosage forms and strengths:
Solution, oral rinse: 0.12%
Liquid, topical: 0.5%, 2%, 4%